फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - चम्चा र चम्चेको गाईजात्रा !
चम्चा र चम्चेको गाईजात्रा ! घिमिरे ‘मैदेली’
प्रकृतिले बनाएको यस्तो हात हुँदाहुँदै पनि मानिसले केही खानुप¥यो भने किन चम्चा नै प्रयोग गर्छ भन्या त हात जोगाउन र चम्चा खेलाउन पो रहेछ । दुनियामा जति हात छन् त्योभन्दा दोब्बर चम्चा बनेका होलान् । वास्तबमा यो मुलुकमा चम्चा चलाउने मात्र त कति पो होलान् र त्यसै भएर त होला नि एउटा चौचन्डाल चम्चेले पनि कयौँ चम्चा चलाएको !
भात खाउ कि भुजा, खाजा खाउ कि चमेना, चम्चेलाई चाहिन्छ चम्चा । कुनै खानेकुरामा पनि देखिने र चिनिने गरी सोझै आफ्नो हात लान आँट नआएर त होला नि चमचेले चम्चा तेस्र्याएको । त्यही चम्चा पनि अलि सफा अलि राम्रो कम्पनीको भरपर्दो त चलाउनु पर्छ । आफैँलाई टिटानस र सत्यानास हुने खालका उहिल्यै सत्रसालतिर बन्या पुराना र खियापरेका चम्चा चलाएर पनि कोही स्वस्थ रहन सक्छ ? खान नपाहरूले चम्चाको कारणबाट अमन र बमन भएपछि बल्ल थाहा पाए खियापरेको चम्चा चलाउन नहुने रहेछ भनेर । अब फेरि चाख्न सक्छौ भने ।
देखियो यो साल त्यसै चमचम पर्ने चम्चेले चम्चा चलाउँदा चम्चा र चम्चे दुबैको बेहाल परेको ! भन्न त ठूलो भान्साका हल्दार बाबूले रत्नपार्कबाटै चमेनागृहतिर चम्कनेलाई पुराना चम्चाको प्रयोग नगर है अब त टिटानस लाग्छ भनेका थिए । नमान्नेको के गति भो देख्नु भो ?
बाका पालाको चम्चा अग्नि प्रशोधन नगरी उसिन्या टर्रो कोइरालो खाने प्रकाशले कोइरालाको नाक काटेर चम्चासँगै खिया लागी बेकम्बा बने । बल्ल देखे बाबु र कान्छाबाबुको अनुहार । अब त बाबुले खाएका थाल छुन पनि नपाउने भए । त्यही चम्चाले सचितको मुख बङ्ग्याएर उनलाई नै नङ्ग्यायो । शिरिषले चम्चालाई नै चम्चे भनेर रिस गरे । कमलको मुखलाई चार अमल च्यातिदियो त्यही चम्चाले । भरतलाई केशरमहलमा केश केलाइदिए वाचकशिरोमणिको सम्झनामा । आखिरमा गाईजात्रा भनेको पनि दाइभाइ फटाउने र पिटाउने जात्रा त रेछ ! सिङ भाँचिएको गोरुले बल्ल बुझ्यो । केशर सरलाई अन्तै सर भनेको, टङ्कलाई पङ्क बनाएर टुकुचामा चोबलेको,े अनि दुर्गा दिदीको नाक टेढो पारेको पनि त त्यही चम्चाले नै हो । खिया लाग्या चम्चा नपोली नपखाली खाली मुखाँ कोचेपछि पनि सन्चो हुन्छ त ? त्यही चम्चाको कुप्रयोगले गर्दा कीर्तिनिधिको शिरकोे टोपी भुइँमा खस्यो, तुलसी थचक्कै बस्यो, खरानी घस्यो, निरञ्जन निराकार भयो, बद्री मण्डलले भूमण्ड छोड्नुप¥यो । खराब चम्चाबाट खाइने रसमा भाइरस हुनेकुरा अब त सबैलाई चेतना भया । सारा नेपाली जनताले पुराना र थोत्रा चम्चा र चम्चेलाई बर्खास्त गर भनिसकेपछि अझै पनि पुराना चम्चा मोह नै गरिन्छ भने भिरमा जाने गोरुलाई कुन गाईले गौँडो छेक्ला ? उसलाई त रामको सट्टा हराम बोले हुन्छ ।
भन्नुमात्र गाई–जात्रा साँढेजात्राको मात्रा बढिरहेछ । भोलि के बिजात्रा हुने हो ! यी नाक बाङ्गे, मुखबाङ्गे, ओठबाङ्गे, नाङ्गे र उदाङ्गेहरूको अझ कुन गाईजात्रा हुने हो । माधव र दुर्ज राई ताइले आफ्नै छाती ताके हुने भएको छ । चम्चाको चमत्कार अब त चम्चेले पनि थाहा पाइसके । कसका लागि को चम्चा को चम्चे ? सबै चम्चा सबै चम्चे । सुना थालाँ सुनकै चम्चाले खाएर चम्चम् गर्नेका चम्चा नै नक्कली परेर खिएको देखिन थाल्या बेलाँ यी जाबा पुराना चम्चा र चम्चेलाई टुकुचाको जलले नपखाली खाली प्रयोग गर्नु मुनासिफ देखिन्न है भनी गाईजात्रे दाइले भनेको सुन्दा पो होजस्तो लाग्या छ । अब यो गाईजात्राको हलुवापुरी यी चम्चेहरूले कुन चम्चाले खाँदारहेछन् हेरौँ ।